Magaca ugu caansan kubadda cagta haweenka - BBC Somali
Magaca ugu caansan kubadda cagta haweenka
Weeraryahanadan Brazil u dhalatay ee 29 jirka ah, oo min gool dhalisay 91-kii cayaarood ee caalami ah ee ay dheeshay, ayaa weli u muuqata mid heer sare ay awoodeedu tahay.
Inkastoo sanadkii 2014-kii ay ku guuleysatay horyaalka dalka Sweden – markii lixaad – waxa ay ku guuldareysatay cayaartii kama dambeysta ahayd ee horyaalada dumarka – balse sanadkan ayay qaaday koobka Sweden ee loo yaqaano Svenska Supercupen.
Waxay tiri: “Waxaan dareemayaa farxad aad ah in la isoo xusho. Waxaan dareemayaa in guul ay ii tahay inaan ka mid noqdo shanta haween ee isu soo hartay. Waa mid muhiimad gaar ah leh, waayo waxaa na xukminaya dadweynaha, dadka idinla socda.”